Toogasho iyo qarax miino oo siyaabo kale duwan uga dhacay degmada Hodan ee G/Banaadir. - Awdinle Online
Toogasho iyo qarax miino oo siyaabo kale duwan uga dhacay degmada Hodan ee G/Banaadir.
February 6, 2020 (Awdinle Online) –Wararka ka imaanaya Xaafada Black Sea ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaas Kooxo hubeysan ay ku dileen Darawal Mooto Bajaaj.
Rag ku labisan direeska Ciidamada dowladda ayaa la sheegay in saaka Xaafada Black Sea degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ku dileen Wiil Bajaajle ah waxaana la sheegay in kooxdii dilka geysatay ay Mobile kii ka qaateen Marxuumka ay dileen.
Goob-joogayaal ayaa laga soo xigtay in kooxda dilka geysatay in ay doonayeen marxuumka in ay ka dhacaan Mooto Bajaajta uu ku shaqeysanayay muran kadibna ay toogteen.
Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta ka baxsaday waxaana meydka marxuumka goobta ka qaaday dadka deegaanka oo ku wareejiyay laamaha amaanka Magaaladda Muqdisho.
Isla degmada Hodan magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qaraxmiino oo la eedtay Ciidamo ka tirsan Dowladda Soomaaliya.
Sida wararku sheegayaan, qaraxa oo ahaa Miino wadada lagu aasay ayaa qabsatay gaari Cabdi Bile ah, kaasoo marayay Irida Carwadii hore ee Qaranka oo ku taala xaafada Taleex.
Dad goob joogayaal ah ayaa Warbaahinta u sheegay iney arkeen khasaare gaaray askarta la beegsaday, walow aysan si dhab ah u xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay, maadaama ay ku adkaatay iney u dhowaadaan.
Gawaarida gurmadka deg dega ee Ambalaasta ayaa durba gaartay halka qaraxa uu ka dhacay, iyagoo goobaha caafimaadka ula cararay dhibanayaasha waxyeelada ay gaartay.
Irida Carwada oo ku taala meel aad ugu dhow xarunta degmada Hodan ayaa dhowr jeer sida oo kale qaraxyo Miino oo khasaare kala duwan sababay lagula eegtay askar dowladeed iyo qaar kamid ah Haweenka ka shaqeeya arrimaha nadaafada.
Majirto cid sheegatay masuuliya qaraxa ka dhacay degmada Hodan ee Gobolka Banaadir waxaana inta badan weerarada noocaan ah looga bartay dagaalamayaasha Al shabaab.
Previous articleFaarah Macalin:- Ciidanka Kenya waxa ay Soomaaliya u joogaan ka ganacsiga dhuxusha iyo Sokorta sharci darrada ah.
Next articleSafiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray Ardayda ku sugan Shiinaha